PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - INumsa ifuna kuphele amatoho emafemini
INumsa ifuna kuphele amatoho emafemini
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
INYUNYANA yabasebenza ngokusansimbi, iNational Union of Metal Workers South Africa (Numsa) ifuna kuphele amatoho emafemini akuleli kodwa abantu baqashwe ngokuphelele.
Lesi siphakamiso senziwe ngemuva kokuteleka kwabasebenzi basemafemini enza imikhiqizo yeplastiki ePinetown abaveze ukuthi baholelwa u-R9 ngehora.
Esitatimendeni esithunyelwe abezindaba, uNobhala Jikelele weNumsa KwaZulu-Natal, uMnuz Mbuso Ngubane, uveze ukuthi abasebenzi baseMpact Plastics esePinetown balaxaze amathuluzi ngoba befuna ukuholelwa imali efanele.
Uveze ukuthi abasebenzi abangu-140 abayitoho bafuna ukuholelwa u-R40 ngehora hhayi uR20 abawutholayo njengamanje.
Uphinde waveza ukuthi bazohlangana nabanikazi beFlexible Plastics and Packaging nayo esePinetown emuva kokuthi abasebenzi beveze ukuthi baholelwa u-R9 ngehora futhi abayitholi nemali yokusebenza amahora engeziwe.
“Amalungu ethu asebenza ngaphansi kwesimo esingabekezeleleki.
“Abasebenzi abanazo izindlu zangasese futhi abaholelwa umholo onqunyiwe ngomsebenzi abawenza ngehora,” kusho uNgubane.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwabakwaFlexible Plastics ayiphumelelanga njengoba kuthiwe umnikazi wefemu usemhlanganweni, kwathiwa uzobuyela entathelini kodwa ugcine engabuyelanga kuyo kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.
Esitatimendeni esithunyelelwe Isolezwe, abakwaMpact bathe abasebenzi abatelekile akusibona abaqashwe yile nkampani kodwa ngabenkampani esebenzisana nabo ezimele kodwa sekukhona abasebenzi babo abangenele isiteleka ngoba bezwelana nalaba abasebenza kwenye inkampani.
UMnuz Paul Visagie esinye sezikhulu zakwaMpact Plastics, uthe abasebenzi babo bangenele isiteleka ngenxa yokusatshiswa yilaba abasebenzela enye inkampani.
“Senza konke okusemandleni ukuxazulula udaba lwesiteleka sabasebenzi benkampani esisebenzisana nayo ngoba sinomthelela emsebenzini wethu. Okwamanje amakhasimende ethu awakaphazamiseki ngoba asawuthola umkhiqizo kodwa senza konke okusemandleni ukuxazulula isimo,” kusho uVisagie.
UNKSZ Queen Mathebula ejabulela ukunqoba kumqhudelwano iChampionship Boerewors ngokuthaka i-boerewors eyehla esiphundu